Global Voices teny Malagasy » Manapaka i Myanmar : Lahatsary 4 Hanampiana Anao Hahafantatra Ny Fifidianana Hoavy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Novambra 2015 2:52 GMT 1	 · Mpanoratra Seelan Palay Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Myanmar (Birmania), Ady & Fifandirana, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Daw Aung San Suu Kyi, mpitarika ny fanoherana no sady efa nahazo Loka Nobel, miresaka amin'ny vahoaka. Sary an'ny Kamayut Media, fampiasàna nahazoana alàlana.
Ny 8 Novambra 2015, hampiantrano ny fifidianana faharoa atao any aminy i Myanmar hatramin'ny 2010 nidirany tao anatin'ny tetezamita ho amin'ny demaokrasia. Ilay fifidianana no hamaritra na hitohy hanao fanavaozana misimisy kokoa ilay governemanta tohanan'ny tafika na tsia ary hamela ireo mpitarika ny fanoherana hitàna andraikitra bebe kokoa amin'ny fitantànana ny firenena.
Efa ho 50 taona i Myanmar no teo ambany fifehezana mivantana nataon'ny tafika. Tamin'ny 2010, sambany tamin'ireo fifidianana ka navela hisy fandraisana anjaran'ireo antoko politika marobe, isan'izany ireo vondrona mpanohitra. Natomboky ny governemanta ihay koa ny fametrahana fanaovaozana politika samihafa, toy ny famotsorana ireo gadra noho ny politika sy ny fanafoanana ny sivana ho an'ny media. Hatramin'ny anio, anefa, mbola ny tafika no mitohy manana fahefana goavana, manendry ireo manamboninahitra ambony sy efa nisotro ronono ho any anatin'ireo rantsana rehetra ao amin'ny governemanta.
Asongadina etoana ireo lahatsary sasany nakarin'ny sehatra Engage Media, iresahany ny fifidianana hatao amin'ity taona ity, manan-tantara sy miteraka resabe, manomboka amin'ny topimaso nataon'ny Democratic Voice of Burma (media mpilaza vaovao) niaina an-tsesitany teo aloha.
Eto ambany, ny Ma Ba Tha vondrona Bodista nasionalista mankalaza ny nahalàny ireo “Lalàna efatra Fiarovana ny Foko sy ny Finoana”, izay manilika tsara mihitsy ireo Miozolmana maro ao Myanmar tsy ho afaka mifidy. Raha miaraka amin'ireo hadisoana  anaty lisitry ny mpifidy, vinaina ho eo amin'ny 4 tapitrisa eo ireo olompirenena  tsy ho afaka hifidy manerana ny firenena.
Daw Aung San Suu Kyi, mpitarika ny Fanoherana no sady efa nahazo Loka Nobel ihany koa, dia mikatsaka ny ho voafidy indray amin'ny 8 Novambra. Tao Rakhine izy no nanomboka ny fanentanany, faritra iray nisian'ny fifandonana teo amin'ireo Bodista sy ny Miozolmana ka nanery Rohingya an'arivony maro hifindra fonenana. Ny Rohingya, izay ny ankamaroany dia Miozolmana, dia tsy eken'ny governemanta ho toy ny olompirenen'i Myanmar. Anisan'ireo voahilika tsy ho afaka mifidy amin'ny 8 Novambra ny Rohingya.
Mifanakalo hevitra momba ireo tetikady samihafa ampiasain'ny antoko eo amin'ny fitondràna sy ny mpanohitra ilay fandahàrana miresaka sosialy sy politika, Dateline Irrawaddy, anatinà tontolo iray izay tsy afaka ialàna mihitsy ny fifandraisan'ny finoana sy ny politika. Tany am-piandohan'ity taona ity ny fandaharana dia nitafatafa tamin'ny Filohan'ny Kaomisiona misahana ny Fifidianana,  momba ny fitokisana azo omena ilay hazakazaka ho amin'ny fifidianana.
Raha maridrefy ireo lahatsary  etsy ambony, mbola lavitra sy sarotra ny dian'i Myanmar ho any amin'ny demaokrasia.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/11/06/76339/
 fifidianana : https://globalvoices.org/2015/09/18/in-myanmar-election-candidates-chase-votes-via-likes/
 4 tapitrisa eo ireo olompirenena: http://www.reuters.com/article/2015/10/20/us-myanmar-election-voters-insight-idUSKCN0SE2GN20151020
 tetikady : https://globalvoices.org/2015/09/22/as-election-draws-near-myanmar-turns-to-social-media-at-democratic-turning-point/
 nitafatafa tamin'ny Filohan'ny Kaomisiona misahana ny Fifidianana,: https://www.engagemedia.org/Members/irrawaddy/videos/Dateline_Irawaddy_2015_Elections/